Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Moroccan Achraf Hakimi Childhood Story Plus Ihe Ndi Utold Biography Eziokwu
Akụkọ ndụ anyị nke Achraf Hakimi na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye, Nwa, Ndụ, ,gbọala, Ezigbo ndụ na Ndụ Onwe.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ banyere njem ndụ ndị egwuregwu bọọlụ, site na mgbe ọ bụ nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ ogidi ya gaa na gallery ndị okenye - nchịkọta zuru oke nke Achraf Hakimi's Bio.
Akụkọ ndụ Achraf Hakimi.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye siri ike ma dị ike zuru oke nke dị mma na FIFA ọrụ mode. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-agụ egwu na-atụle ịgụ Achraf Hakimi's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Achraf Hakimi Nwatakiri Akụkọ nke:
Otu n'ime foto izizi nwata nke Achraf Hakimi.
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “Arra". Achraf Hakimi Mouh a mụrụ na 4th ụbọchị November 1998 na Madrid na Spain.
Ọ bụ onye mbụ n'ime ụmụaka atọ amụrụ nne ya na nna ya mara mma bụ ndị na-enwetakarị ego. Know maara na onye na-agbachitere ya bụ ma onye Spen na mba Moroccan?
Eziokwu bụ, ndị nne na nna Achraf Hakimi bụ ndị si mba Morocco kwabatara Spain ogologo oge tupu a mụọ ya.
Yabụ, Achraf nwere ezigbo ezinụlọ sitere n'Africa n'agbanyeghị na a zụlitere ya na mba Europe - kpomkwem na Getafe, na Madrid, Spain. Ya na nwanne ya nwoke bụ Nabil nọrọ ()onye ọ na-ewere dịka ezigbo enyi ya) na nwanne nwanyị Widad.
Achraf Hakimi- Nke a bụ foto nke Achraf ya na nwanne ya nwoke Nabil na-etolite na Madrid Spain.
N'ịbụ onye na-eto eto na Getafe na ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke Madrid, nwa Achraf bụ nwa ewu siri ike nke mama ya na-ekwukarị banyere ọchịchọ ya ịhụ ya ka ọ gbalịa nwee obi ụtọ n'egwuregwu egwuregwu karịsịa igwu mmiri.
Otú ọ dị, Achraf maara na agụụ ya dị na football. Dika odi, o sighi na-agha egwu nke o maara na otu ubochi ghota ulo ya site na onodu ego ha.
Achraf Hakimi Ezinụlọ:
Ezinụlọ Achraf Hakimi gbara mgba mgbe ọ bụ obere nwa. Banyere agbụrụ ya dara ogbenye, nna ya bụ onye na-ere ahịa n'okporo ámá ebe mama ya bụ onye na-ehicha ụlọ.
N'ịmara nke ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta na nne na nna Achraf Hakimi rụsiri ọrụ ike ịkpata ọtụtụ ihe iji nweta ndụ iji mezuo nrọ nwa ha nwoke.
Na nzaghachi maka mgba ha, Achraf mere ndị mụrụ ya obi ụtọ site n'ichebe olileanya ha banyere ọganihu ya na football.
Ozi ọma dị otú ahụ mere ka ha ọbụna ịrụsikwu ọrụ ike, na-adọgbu onwe ha n'ọrụ ehihie na abalị. N'agbanyeghị nke ahụ, ndị nne na nna Achraf Hakimi ka nwere ike ibuli ego iji nweta ngwa egwuregwu dịka obere akpụkpọ ụkwụ bọọlụ na ngwa ndị ọzọ iji kwado Achraf.
Achraf Hakimi Ndụ Mmalite na Ndụmọdụ:
Nke mbụ bụ ọchịchọ Achraf na-ewere ọzụzụ ya na ụlọ Deportivo Colonia de Ofigevi dị na mpaghara.
Ọ bụ na klọb dị n'ógbè ahụ ka Achraf na-eto eto buru ụzọ mee nzọụkwụ mbụ ya na asọmpi egwuregwu. Mgbe nwatakịrị ahụ nọ na ya, ọ naghị eche banyere agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ.
Ogo nke ịdị mkpa: Hụ onye meriri otu ihe egwuregwu na klọb nwata ma soro nwanne ya nwoke mee mmemme ndị dike.
N'ezie, ọ bụ ụmụ amaala karịa ụmụ akwụkwọ. Ndị nne na nna Achraf ekwenyeghị na mmepe ahụ.
N'oge na-adịghị anya tupu ha emee udo na eziokwu ahụ bụ na ọ chọtara nzube na football, egwuregwu ha ga-ahọrọ ka nwatakịrị na-egwu karịa ikiri ka ọ bụrụ nsogbu.
Afọ Achraf Hakimi nke Real Madrid:
N'oge ọzụzụ ya na klọb nke Deportivo Colonia de Ofigevi dị n'ógbè, Achraf ghọrọ onye egwuregwu na-ekwe nkwa nke nkà ya agbanahụ ọfụma nke onye si Real Madrid.
Georginio Wijnaldum Child Story Story na ihe omuma
N'ụzọ dị otú ahụ, a kpọtara Achraf dị afọ 8 na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Real Madrid ebe ọ malitere ọzụzụ na ntọala benjamin ụlọ ọrụ tupu ọ tolite nke ọma ka a nabata ya na usoro ndị ntorobịa La Fábrica.
Nwere ike ịhụ Achraf ka ọ na-ekpori ndụ oge ya na agụmakwụkwọ Real Madrid?.
Achraf Hakimi Biography- Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe Achraf na-eto eto, ọ gbagoro n'ọkwá na-enweghị ntụpọ na nka ọkachamara ya nwere ọmarịcha. Kedu ihe ọzọ? o nwere ezigbo agwa iji nweta nkwalite n'ime ndị otu klọb.
Nkwalite ahụ bịara n'afọ 2016 wee soro Achraf rịgoro ozugbo na Los Blancos isi squad dị ka ndabere na Dani Carvajal na Nacho Fernandez na August 2017.
Na ndị isi nke Real Madrid, Achraf nwere ike iji obi ụtọ hụ ọdịnihu ma mara ihe a na-atụ anya ya n'aka ya iji mee ndị otu mbụ.
Achraf Hakimi's Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
N'iji nọmba 19 mara mma, Achraf mere ka o nwekwuo mmekọrịta ya na ndị otu Real Madrid.
N'ezie, ọ chọtara azụ nke ụgbụ ahụ ugboro abụọ n'akụkụ ya na egwuregwu La Liga n'oge oge 2017/2018.
Kedu ihe ọzọ? ọ mere ngosi abụọ na asọmpi 2017–18 UEFA Champions League nke mere ka Real Madrid bulie aha ya nke ugboro atọ.
Site na mmepe ahụ, Achraf ghọrọ onye ọkpụkpọ Moroccan mbụ ga-emeri Champions League. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Nwee mmeri na mata mba. Nke ahụ bụ nnọọ ihe Achraf mere.
Nwanyị Achraf Hakimi, Nwunye na Kidsmụaka:
N'ịga n'ihu ndụ ịhụnanya nke Achraf Hakimi, mmasị ọha na eze na onye na-agbachitere mmekọrịta ịhụnanya ya na enyi ya nwanyị bụ Lucía Utrera Valenzuela malitere na 2017 mgbe ọ nwetara ohere igwu egwu maka otu egwuregwu mbụ nke Madrid.
Agbanyeghị na lovebirds ahụ tụrụ ndị Fans n'anya dịka ụzọ zuru oke, ebughi n'obi ka ha bụrụ di na nwunye.
Achraf hụrụ Lucía Valenzuela n'anya n'etiti 2015-2017.
Na 2018, Achraf Hakimi malitere ịlụ 'nwanyị kachasị mma n'ụwa' Hiba Abouk bụ onye dị afọ iri na abụọ karịa ya.
Onye na-agbachitere ahụ gaa na mgbasa ozi mgbasa ozi iji kpughee enyi nwanyị ọhụrụ ya bụ Hiba Abouk site na iziga ya ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ.
Hiba bụ onye na-eme ihe nkiri na Spanish bụ onye a kọrọ na ọ dị afọ iri na abụọ karịa obi ya. Onye chọrọ ịma!! afọ bụ naanị ọnụọgụ.
Achraf na Hiba esonyere na ememe alụm di na nwunye na afọ amaghị na ụbọchị.
Mana anyị ji n'aka mara ụbọchị nke nwunye Achraf Hakimi mụrụ nwa ha nwoke. Ọ bụ na 12th nke February 2020.
Mata nwunye Achraf Hakimi- Nke a bụ ọmarịcha foto nke Moroccan International ya na nwunye ya Hiba About na nwa nwoke.
Ndụ Achraf Hakimi:
E nwere ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi nke egwuregwu bọọlụ nke ji ihe ịga nke ọma ha na football n'ihi mbọ ịchụ àjà nke nne na nna na ezinụlọ ha.
Ndị ji egwu bọọlụ anyị bụ otu n’ime ha. N'akụkụ a, anyị ga-ewetara gị ọtụtụ eziokwu banyere ndị ezinụlọ Achraf Hakimi na-amalite na nne na nna ya.
Banyere Nna na nne Achraf Hakimi:
Aha ndị nne na nna agbachitere amabeghị. Ha nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ Moroccan wee kọọrọ na Spain dị ka ndị mbata Moroccan mgbe ha karịrị 20 afọ.
Obodo nna Achraf dị na Morrocco dị na Oued Zem ebe mama ya si Ksar el-kabir na mba ahụ.
More na ndị nne na nna Achraf Hakimi- Enwere ndị egwuregwu ole na ole na-ekele ndị mụrụ ha site na ịkpọrọ ha ezumike. Achraf bụ otu n’ime ha.
A na-akwụ ndị nne na nna Achraf Hakimi ụgwọ maka inwe okwukwe na nwa ha nwoke na-agba bọl n'oge ọ bụ nwata. Ha nyere ya ihe niile iji hụ na ọ ga-aga nke ọma.
N'ihi ya, onye na-agbachitere ahụ na-egwuri egwu maka itinye uche nna ya na mama ya maka ọdịnihu n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ha bụ ndị na-akpata obere ego na-arụ ọrụ dị ala dị ka onye na-ere n'okporo ámá na onye na-ehicha ụlọ.
Banyere ụmụ nwanne Achraf Hakimi na ndị ikwu:
Hispanic-Moroccan nwere ụmụnne abụọ. ha gụnyere nwanne ya nwoke nke yiri Nabil tinyere nwanne nwanyị Widad nke yiri anya. Ọ dighi ihe amaghi banyere umu nne bu ndi huru n’anya ma na akwado nkwado nwanne ha.
Banyere ndụ ezinụlọ na nna ochie nke onye agbachitere ahụ, amachaghị banyere nne na nna ya na nna nna ya ebe amatabeghị nwanne nna ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya n'oge edere akụkọ ndụ a.
'Smụ nwanne Achraf Hakimi- Have hụla foto ndị a na - adịghị ahụkebe nke Achraf na nwanne ya nwanyị na nwanne ya nwoke?
Achraf Hakimi Ndụ Onwe Gị:
Ọnye na-bụ Achraf «Arra» Hakimi? - nnukwu onyinye nke Inter. Kedu ihe na - eme ndị na - agba bọọlụ na ụdị agwa ọ bụ?
Nke a bụ oge dabara adaba iji lee eziokwu banyere onye na-eti ihe iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Iji malite, Achraf persona gosipụtara omume nke ndị mmadụ nke akara Zodiac bụ Scorpio.
Ọ nwere oke mmụọ, ọgụgụ isi, nwee nnukwu ọchịchọ ma meghee ikpughe eziokwu banyere ndụ ya na nke onwe ya. Ihe onye na-agbachitere ya na ihe omume ntụrụndụ ya gụnyere ige egwu, ime njem, ịkụ ọkpọ na iso ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
Egwú ọ na-atọ gị ụtọ ka Achraf?
Achraf Hakimi Web Face:
Ekwu okwu Achraf Kakimi imefu omume na ịchọpụta ego, ọ na-enweta ezigbo ego na ụgwọ ọnwa na ụgwọ ọlụ maka ịgba bọl dị elu ebe nkwenye bụ ntinye aka ruru ego ruru nde $ 2 nde.
N'ihi ya, ndụ okomoko nke onye agbachitere ahụ anaghị eju ndị na-agba n'anya anya ọkachasị mgbe ha hụrụ ya ka ọ na-agba n'ụgbọ ala mara mma ma ọ bụ mesịa mata banyere uru ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọ bi na ya bara.
Achraf Hakimi: Ọ nwere Audi gụnyere na nchịkọta ụgbọala ya.
Eziokwu nke Achraf Hakimi:
Iji mechie akụkọ nwata anyị Achraf Hakimi na akụkọ ndụ ya, ebe a amachaghị ma ọ bụ akụkọ a na-akọwaghị banyere onye agbachitere ahụ.
Eziokwu nke mbụ: Nkwụsị ụgwọ ụgwọ ọnwa:
Kemgbe ọ bịarutere na Dortmund, ọtụtụ ndị fans jụrụ ajụjụ a; ego ole ka Achraf Hakimi na-akpata?….
Mgbe ị bịanyere aka n'akwụkwọ maka ụlọ ọrụ German, nkwekọrịta nke ndị ịgba ọsọ ụkwụ hụrụ ya ka ọ na-etinye ego na-akwụ ụgwọ Nde Euro 1.5 kwa afọ. N'okpuru ebe a bụ ụgwọ ọnwa Achraf Hakimi kwa afọ, ọnwa, ụbọchị, oge awa, nkeji na sekọnd (dika nke Machị 2020).
Chgwọ nke Achraf Hakimi na Euro (€)
Chgwọ nke Achraf Hakimi na Pound (£)
Arnnweta ego kwa afọ € 1,500,000 £ 1,300,000
Ego kwa ọnwa € 125,000 £ 108,333.3
Arnnweta ego kwa izu € 28,846.15 £ 25,000
Ego kwa ubochi € 4,109.59 £ 3,561.64
Arnnweta ego kwa elekere € 171.23 £ 148.40
Ego kwa nkeji € 2.85 £ 2.47
Arnnweta ego na Sekọnd € 0.05 £ 0.04
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Achraf Hakimi'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Otu nwoke na Spen kwesịrị ịrụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 7.4 iji kpata € 144,833, nke bụ ego Martin Braithwaite na - enweta na 1 ọnwa.
Eziokwu # 2- FIFA ọnụego:
Onye na-agbachitere ya nwere ọkwa dị ka 81 dị ka ọ bụ na February 2020. Ọ bụ ezie adịghị elu, ọkwa ahụ na-ekwu maka otu onye na-agbachitere si agba ọsọ na football kachasị elu ọbụna na mbinye ego na Borussia Dortmund ebe ọ na-arụ ọrụ ya n'oge ede.
Ogo ya na-ala elu. Ebe E Si Nweta Foto: SoFIFA.
Eziokwu # 3- Tattoos:
Achraf enweghị egbugbu ma obu aru nka n’oge ede ihe omimi a. Kama, o yiri ka ọ na-achọ iberibe ngwungwu isii ya nke ga-aga nke ọma n'ogologo 5 ụkwụ, iri na otu.
You hụrụ egbugbu ọ bụla? ka anyi mara n’ime igbe kwuru? Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Eziokwu # 4- Okpukpe:
Ikpe ikpe site n'ile ya anya na aha ya, ị nwere ike ịsị na ọ ga-abụrịrị na ndị ezinụlọ Achraf Hakimi bụ ndị Alakụba.
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ onye na-agbachitere bụ onye Alakụba. E gosipụtara okpukpe mbụ na aha ya Hakimi.
Kedu ihe ọzọ?… Ọ lụrụ nwunye nke nwere akara mmụta na omenala ndị Alakụba ma chọọ ka ndị Alakụba 'Ramadan Mubarak' na Instagram.
Ọ bụghị ihe ijuanya ịhụ foto Achraf biputere nke a na aka ya na Instagram. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Eziokwu # 5- okingokingụ sịga na Mmanya:
N'ihi nkwenkwe Alakụba ya, Hakimi agaghị eche echiche nke ị takingụ ihe ọ hardụ hardụ siri ike.
Agbanyeghị, amabeghị ọtụtụ ihe banyere echiche ya banyere ise anwụrụ mana anyị ji n'aka na ọ gaghị eme ihe ọ bụla nwere ike imebi ahụike na ahụike ya.
Eziokwu # 6- Mmezu na 21:
N'ịbụ onye dị afọ 21, Achraf Hakimi enwetala mmadụ 5 na nsọpụrụ klọb maka aha ya. N'okpuru ebe a, eziokwu a gosipụtara na ọ bụ nke kachasị mma na-eto eto na egwuregwu bọọlụ ụwa, ụwa kachasị mma ma eleghị anya. Kedu ihe ị chere?…
Achraf Hakimi Eziokwu- Ihe ọ rụzuru na 21. Ebe e si nweta ya: Bundesliga
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ akụkọ nwata Achraf Hakimi Plus Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Eziokwu Biography nke Achraf Hakimi (Ajụjụ Wiki)
Aha n'uju: Achraf Hakimi Mouh
aha otutu: Arra
Andbọchị na Ebe Ọmụmụ: 4 Nọvemba 1998 - Madrid, Spain
Ndị nne na nna: Mr na Mrs Hakimi
Ụmụnne: Ouidad (Nwanna Nwaanyị), Nabil (Nwanna)
Nwa nwanyi: Hiba Abouk
Children: Nwa nwoke (Achraf Jnr)
Ezinụlọ Ezinụlọ: Morocco
Oge ndụ nwata mbụ na klọb Ofigevi na Real Madrid
Afọ & Elu 21 (dika na March 2020) na 1.81 m (5 na 11 na)
Ihe akara Zodiac: Scorpio (onye nwere ume, onye nwere obi ike, nke nwere mmụọ, onye isi ike, ezigbo enyi)
-arụ: Onye na-agba egwu (Defender / Winger)